यो धरती मा सबैभन्दा विषालु र अत्यन्तै खतरनाक सरीसृप को छ। यसको venom अत्यधिक विषाक्त छ। cobras को विशिष्ट सोह्र प्रकार, र ती सबै अति खतरनाक छन्।
अफ्रीका (लगभग सम्पूर्ण महादेशमा), दक्षिण र मध्य एशिया (पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका) - Cobras साधारण पुरानो विश्व बसाबास गर्नु। पहिले नै उल्लेख, यो छ एक विषालु सर्प। कोबरा धेरै thermophilic छ - त्यो कहाँ पतन र हिउँदमा हिउँ बाँच्न छैन। अपवाद, सायद, एक केन्द्रीय एशियाली कोबरा छ। त्यो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान बसोबास। को driest ठाउँहरू, त्यसैले तिनीहरू यी सरीसृप लागि उपयुक्त छन्। अक्सर, तिनीहरूले ब्रश, jungles, मरुभूमिमा र अर्ध-मरुभूमिमा चयन गर्नुहोस्। कहिलेकाहीं तिनीहरूले नदी बैंकहरू मा देख्न सकिन्छ, तर प्राय तिनीहरूले नम स्थानहरू जोगिन। कोबरा पहाडी क्षेत्रमा पाइने, तर उच्च 2400 मिटर भन्दा समुद्र स्तर माथि।
यी सांप वर्षमा एकपटक प्रकार। यो जनवरी र फेब्रुअरी वा वसन्त सबैभन्दा अक्सर हुन्छ। धेरै पक्षहरूमा यी सरीसृप को Fecundity प्रजाति मा निर्भर गर्दछ। एक महिला सत्तरी-आठ अन्डा सम्म राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
युवा बाँच्न जन्म दिने सबै प्रकारका मात्र एक Rinkhals। यो साठी छोराछोरीलाई जन्म दिन सक्षम छ। यो समयमा, शाही र भारतीय कोबरा धेरै आक्रामक हुन सक्छ। तिनीहरूले जनावर र मानिसहरूलाई को गुँड टाढा ड्राइभिङ, आफ्नो जवान सुरक्षा। यो व्यवहार तिनीहरूलाई लागि विशिष्ट छैन, र मात्र प्रजनन मौसममा नै प्रकट।
जो एक कोबरा को डर छ
यो सर्प अत्यन्तै खतरनाक छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो पनि गम्भीर शत्रुहरू छ। उनको शावक ठूलो सरीसृप खान सक्छ। वयस्क meerkats र mongooses हत्या हुन सक्छ। यी पशुहरू तर तिनीहरूले चलाखीपूर्ण ध्यान सर्प आफ्नो गलत आक्रमण मोड्नु गर्न सक्षम छन्, cobras को venom गर्न प्रतिरक्षा छैन। तिनीहरूले सही क्षण पकड र घातक खानको उनको घाँटी कारण। कोबरा, आफ्नो बाटो meerkat वा नेवला मा भेट, भाग्ने को वस्तुतः कुनै मौका छ।
यो प्रजाति सबैभन्दा अफ्रीका र दक्षिण एशिया मा साधारण छ। एकदम अक्सर "Spectacled कोबरा" भनिन्छ। यस्तो शीर्षक त्यो कारण हुड को रियर छेउमा विशेषता ढाँचा गर्न पाए। यो एक shackle दुई ट्रिम घन्टी हुन्छन्। यो विषालु कोबरा नै रक्षा गर्दा, यो शरीर को सामने भाग लगभग ठाडो उठ्छ, र उनको टाउको हुड देखिन्छ पछि। सर्प लम्बाइ 1 मीटर असी सेन्टिमिटर छ। यो मुख्य रूप amphibians फीड - सानो मुसा र छेपारो, र चरा 'अन्डा मा दिन छैन अप। यो एक धेरै prolific छ विषालु सर्प। कोबरा Naja naja अक्सर 45 अन्डा सम्म राख्दछ! यो कि चिनाई हेर्छ र पुरुष को संरक्षण को लागि रोचक छ।
भारतीय कोबरा यस उप। यो दुई मिटरसम्मको दूरी अप मा शत्रु मा विष शुट र अप गर्न दुई सेन्टिमिटर को एक व्यास संग लक्ष्य हिट गर्न सक्षम छ। र म सर्प एक उच्च शुद्धता छ, भन्न पर्छ। शरीरमा विष मार पर्याप्त छैन, सिकार मार्न। विष छाला मार्फत भित्र पस्नु छैन, तर यो बेला श्लेम लाग्एको झिल्ली संग सम्पर्क मा धेरै खतरनाक हुन्छ। तसर्थ, यी सर्प को मुख्य उद्देश्य - आँखा। एक सटीक सिकार पूर्ण आफ्नो दृष्टि गुमाउन सक्छ थिच्नुहोस्। यो बच्नको लागि, तपाईं तुरुन्त पानी प्रशस्त तपाईंको आँखा धुन पर्छ।
मा वितरण अरब प्रायद्वीप र अफ्रीका। यो पनि एक विषालु साँप छ। कोबरा Naja Haje लम्बाइ दुई मीटर सम्म बढ्छ। उनको टाढा यसको भारतीय भान्जा भन्दा कम मा हुड। पुरातन मिश्री, यो शक्ति चित्रण गर्छ, र यसको विषालु खानको सार्वजनिक executions मा हत्या को एक माध्यम रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
सर्प राजा कोबरा (hamadryads)
धेरै यो संसारमा सबै भन्दा ठूलो venomous सर्प छ भन्ने विश्वास गर्छन्। थप तीन मिटर भन्दा वयस्क को लम्बाइ, तर दर्ता अवस्थामा र अधिक प्रभावशाली - 5.5 मीटर! यो एक misconception छ। त्यहाँ भन्दा ठूलो घस्रने जीव राजा कोबरा। यसलाई अलिकति जस्तो लाग्न सक्छ Anacondas विरुद्ध - वास्तवमा, यो प्रजाति केही नमूनों दस मीटर को एक लम्बाइ पुग्न!
को हिमालय, चीन दक्षिणी, फिलिपिन्स, दक्षिण भारत hamadryads वितरण ग्रेटर Sunda द्वीप बाली गर्न, Indochina मा। अधिकांश समय जमीनमा creeping छ, तर यो धेरै राम्रो तरिकाले रूखहरू माथि क्रल र पौडी खेल्न सक्छ। राजा कोबरा - विशेषज्ञहरु, यो अचम्मको प्राणी अनुसार। एक सर्प जस्तै प्रभावशाली आयाम हुन सक्छ जस्तै? यो धेरै हैरानी। साँच्चै, आफ्नो आकार हुनत यो एक अजगर, रूप पनि भारी र विशाल खोज्दैन, उदाहरणका लागि, बस उत्कृष्ट छ।
उहाँले कारण व्यापक वासस्थानमा गर्न अत्यधिक चर छ। प्राय - कालो छल्ले संग एक yellowish हरियो। तिनीहरूले थप साँघुरो र धेरै स्पष्ट छन् निकायको अगाडि भाग, को पुच्छर व्यापक र उज्जवल बन्नेछ। रंग juveniles थप संतृप्त।
यो केही मध्ये एक छ , साँप को प्रजाति अनुष्ठान झगडे व्यवस्था, तर प्रत्येक अन्य क्षति छैन नै क्षेत्रमा सामना जो पुरुष,। यो महिला एक विजेता हो भनेर प्राकृतिक छ। जोडी पुरुष स्पष्ट हुन्छ जो पछि आफ्नो "भावि पत्नी" उहाँलाई लागि खतरनाक छैन भनेर विवाहपूर्वको, द्वारा preceded छ। बारेमा एक महिना पछि, महिला अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। यो घटना हुन्छ अघि, गुँड निर्माण राजा कोबरा भएको छ। कुनै limbs छ कि एक सर्प जस्तै चुच्चो यो कार्य सामना गर्न सक्नुहुन्छ? यो राउन्ड आकारको सुक्खा पात र twigs एक ढेर मा शरीर को सामने भाग rakes बाहिर जान्छ।
बीस देखि चालीस गर्न - अन्डा को संख्या फरक छ। नियम को रूप मा, क्लच यसलाई माथि महिला आफ्नो पात र स्थान पूर्व-बन्द सुरक्षित राख्दछ। तर अवस्थामा सुरक्षा समावेश छ जो, र पुरुष दर्ता। गर्मी चालू अवधि लगभग एक सय दिन रहन्छ। प्रकाश को महिला सन्तान को उपस्थिति गुँड छोडेर केही समयअघि आफूलाई लागि खाना प्राप्त गर्न। गुँड नजिक राख्न एक दिन बारेमा जवान को जन्म पछि। यसको परिचय भएकोले तिनीहरूले जन्म देखि पूर्ण स्वतन्त्र छन् venom छ, तर धेरै सानो मात्रा, कुन तिनीहरूलाई सानो मुसा र कहिलेकाहीं पनि कीरा शिकार गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी आफ्नो सिकार यो खतरनाक सर्प स्ट्राइकिङ्? कोबरा शाही यसको धेरै बलियो venom खुराक। यसको मात्रा सिकार को आकार र वजन मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, राशि धेरै पटक घातक खुराक छ। यो विष शिकार खाने गरेर, सर्प नै ग्रस्त गर्दैन रोचक छ।
सामान्यतया, क्रममा मानिस, कोबरा बाइट्स तर्साउन टाढा, तर उहाँले शिकार मा उनको आवश्यक किनकी, विष गरौं गर्दैन। तर कुनै पनि मामला मा त आशा गर्न असम्भव छ! कोबरा venom एक हात्ती मार्न केही घण्टा सक्षम छ। यो मांसपेशी सिस्टम paralyzes, र पीडित सास फेर्न नसकिने को मर्छ। शरीर मा विष संग सम्पर्क पछि एक व्यक्ति 15 मिनेट भित्र मृत्यु हुन्छ।
ठूलो चासो को वैज्ञानिकहरू लागि भनेर सर्प छ। कोबरा venom जो, पक्कै, धेरै विषाक्त छ, र मानिसहरूलाई उपयोगी हुन सक्छ। के? यो सानो खुराक मा उनको विष को हृदय र स्नायु प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव छ भनेर औषधीय उत्पादनहरु को निर्माण को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बाहिर फेला परेन अनुसन्धान समयमा, रक्तचाप normalizes। यो विष, संसारभरिका वैज्ञानिकहरू पचास अधिक वर्ष को लागि अध्ययन र अनुसन्धान को यस्तो लामो अवधिको बाबजुद, आधुनिक चिकित्सा लागि उपयोगी छन् कि यसलाई थप र थप नयाँ यौगिकों मा पत्ता लगाउन।
धेरै मानिसहरू कोबरा धेरै आक्रामक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो त छैन। तिनीहरूले धेरै शान्त छन्, तपाईं पनि तिनीहरूलाई phlegmatic व्यवहार कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं asps को बानी परिचित भने, अक्सर दक्ष "charmers" सांप देखाउन जो तिनीहरूले त्यसपछि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। राजा कोबरा - एक जोखिम छ, तर तपाईं त्यो आक्रमण गर्दैन, र सुरक्षित एक मानिस एक सभामा भनेर थाहा हुनुपर्छ।
Amanita virosa: उपस्थिति, खतरा र विशिष्ठ सुविधाहरू
अभोकाडो - फल वा तरकारी? तपाईं एउटा प्रश्न छ, हामी - जवाफ
रूस मा भूकम्प र ज्वालामुखी विष्फोटन: इतिहास र रोचक तथ्य को सूची
Endangered जनावर। म तिनीहरूलाई रहन सक्छौं?
दुई को लागि रोमान्टिक साँझ
मनोरञ्जन केन्द्र "पर्ल" (कबर्डिन्का): वर्णन, समीक्षाहरू, फोटोहरू
कोरल - यो जनावर वा बोट? जहाँ Corals प्रकृतिका छन्?
खाना पकाउने प्रक्रिया subtleties: ओवन मा Sturgeon पाक्नु
उपभोक्ता मूल्यांकन "Rikomed" - वजन लागि प्याच